साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा संलग्नले दुईजनाले किन गरे आत्महत्या? | Rajmarga
साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा संलग्नले दुईजनाले किन गरे आत्महत्या?
काठमाडौ । तस्करीको साढे ३३ केजी सुन काण्डमा तीनको ज्यान गएको छ। एकको हत्या भएको छ भने दुईले आत्महत्या गरेका छन्। मोरङ उर्लाबारी–७ का ३३ वर्षीय सनम शाक्यको हत्या भएको एक महिनापछि अन्य दुईले आत्महत्या गरेका हुन्। तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका प्रेमलाल चौधरीले शुक्रबार आत्महत्या गरे। नेपाल एयरलाइन्सका लोडर चौधरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा थिए।
अर्का आरोपी सानु बनले पनि केही दिनअघि प्रहरी हिरासतमै आत्महत्या गरेका थिए। तर, प्रहरीले बन आत्महत्याको घटना गोप्य राखेको छ। उनी थाई एयरवेजका इन्जिनियर थिए। ‘प्रेमलाल चौधरी शुक्रबार बिहान ४ बजे हिरासत कक्षको ट्वाइलेटमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे । उनको उद्धारका लागि प्रहरी ट्वाइलेटभित्र छि-यो। पासोबाट निकाल्यो । बाँच्छन् कि भन्ने लागेर तुरुन्तै वीर अस्पताल लगियो । तर, बचाउन सकिएन। बनको घटनाको सम्बन्धमा भने थाहा भएन,’ प्रहरी वृत सिंहदरबारका प्रमुख डिएसपी अपिलराज बोहराले नयाँ पत्रिकालाई बताए।
प्रहरीका अनुसार अर्का आरोपी सानु बन पनि सुरुमा निर्धक्क नै थिए । जब उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर भाइबर र फेसबुक अकाउन्ट हेरियो, त्यसपछि हतास बने । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनले हिरासत कक्षमै आत्महत्या गरेका हुन् । चौधरीसँगै पक्राउ परेका थापालाई भने थप अनुसन्धानका लागि शुक्रबारै मोरङस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
Previous post: भारतमा आईपीएल, करोडौंको बाजी नेपालमा
Next post: सरकारी कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई नीजि विद्यालयमा पढाउन नपाउने